हिमाल खबरपत्रिका | अपरिहार्य सबल प्रतिपक्ष
अपरिहार्य सबल प्रतिपक्ष
‘सबल प्रतिपक्षको कबोल’ (१०–१६ मंसीर) आवरण रिपोर्टले राजनीतिक स्थिरता र सबल संसदीय लोकतन्त्रका लागि प्रतिपक्षको महŒव कति हुन्छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरूबीच भएका गठबन्धनलाई ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि’ भनेर प्रचार गरिएको छ । तर एउटा कुनै गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याए मुलुकमा स्थिरता होइन, अराजकता बढ्न पनि सक्छ । दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने शक्ति निरंकुशतातर्फ अघि बढ्ने खतरा हुन्छ । किनभने त्यहाँ बलियो प्रतिपक्ष हुँदैन । सत्ताको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ का लागि सबल प्रतिपक्ष अपरिहार्य छ ।
हिमाल खनाल, इमेलबाट
हिंसाप्रति सरकारी बेवास्ता
‘हिंसालाई हौसला’ (१०–१६ मंसीर) रिपोर्टले चुनावी हिंसाप्रति सरकारको बेवास्ता उदाङ्गो पारेको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बिथोल्ने भन्दै मच्चाएको बम आतंकबाट चुनावी प्रचारमा रहेका उम्मेदवार र दलका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, मतदाता समेत पीडित छन् । उम्मेदवार, उनीहरूका घर र गाडीलाई लक्षित गरी भइरहेका विस्फोटमा एकजनाको ज्यान नै गएको छ भने थुप्रै घाइते भएका छन् । मतदातामा त्रास पैदा गरिरहँदा पनि सरकार संवेदनशील बनेको देखिंदैन । प्रधानमन्त्री हिंसा मच्चाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताउँछन्, तर प्रभाव देखिंदैन । ढुक्कसँग मतदानको वातावरण बनाउन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।
मिलन महर्जन, अनलाइनबाट
‘हिउँदमा हृदयघात’ (१०–१६ मंसीर) लेखमार्फत स्वास्थ्यबारे सचेत गराएकोमा डा. सुमनराज ताम्राकारलाई धन्यवाद । गर्मीयामको तुलनामा हिउँदमा हृदयघातको सम्भावना बढी हुँदोरहेछ । जाडो शुरू भइसकेकाले मुटुका बिरामीले स्वास्थ्यमा अझै बढी ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । अधिक धूमपान र मद्यपान गर्नेहरू त झ्न् सचेत हुन आवश्यक छ । मुटुरोगबाट बच्न नियमित स्वास्थ्य परीक्षणसँगै खानपान र जीवनशैली पनि परिवर्तन गरौं ।
मनोज अर्याल, इमेलबाट
मतदाता नै चनाखो बनौं
‘धर्म रक्षाको अपेक्षा’ (१०–१६ मंसीर) आलेखले निर्वाचनका बेला हुने आचारसंहिता उल्लंघनको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर उजागर गरेको छ । आफैंले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु/गराउनु राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचन आयोगसँगै मतदाताको पनि जिम्मेवारी हो । तर, सबैजना आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् र एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग समेत आचारसंहिता उल्लंघनका सामु निरीह देखिएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि अब मतदाता स्वयम् चनाखो हुनुपर्छ । धनबल र बाहुबलले मतदाता प्रभावमा पार्ने र चुनावी परिणाम पक्षमा पार्ने जोडबल गरिरहेका दल र उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै योग्य उम्मेदवार जिताउन मतदाता सचेत बन्नै पर्छ ।
रामसुदन यादव, अनलाइनबाट
घुमन्तेलाई नयाँ गन्तव्य
‘भेडीगोठैमा’ (१०–१७ मंसीर) गन्तव्य पढेर मन प्रफुल्ल भयो । पछिल्लो समय नेपालीमा घुमघामको संस्कृति बढेको छ र त्यसमा पनि आफ्नै देश घुम्ने चाहनाले प्राथमिकता पाएको छ । चलनचल्तीका घुमघामस्थल र पदयात्रा भन्दा नयाँ पदमार्गमा जानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ । लिपेलेकको पदमार्गबारे जानकारीसहितको यो सामग्रीले घुमघामका पारखीका लागि ‘ट्राभल गाइड’ कै काम गरेको छ । हिमाल ले यस्तै नयाँ गन्तव्यहरू उजागर गर्दै जाओस् ।
सम्झना कोइराला, इमेलबाट
विद्यार्थीको अमेरिका आकर्षण
‘नेपाली विद्यार्थी हालसम्मकै उच्च’ (१०–१७ मंसीर) रिपोर्टले नेपाली विद्यार्थीको अमेरिका मोहको तस्वीर देखाउँछ । वर्षेनि १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी उच्चशिक्षाका लागि अमेरिका पुगिरहेको यो आँकडाभित्र सुखद र दुःखद दुवै कुरा छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षामा बढ्दो नेपालीको रुचि आफैंमा सुखद हो भने विकसित देश पुग्ने नेपाली पढाइ सकेर स्वदेश फर्कने क्रम भने न्यून छ । अमेरिका पुग्ने अधिकांश विद्यार्थी पढाइ सकेपछि एच २ भिसामा काम गर्न र ग्रीनकार्ड लिएर उतै बस्न थाल्छन् । अष्ट्रेलिया र यूरोप जाने विद्यार्थीको अवस्था पनि यस्तै छ । रिपोर्टमा नफर्कने विद्यार्थीको आँकडा पनि समेटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । शिक्षा र सीप भएको नयाँ पुस्ता यसरी नै पलायन भइरहने हो र उनीहरूलाई फर्काउने कुनै योजना नहुने हो भने देश कसरी उँभो लाग्ला ?
पुष्प नेपाली, इमेलबाट